Istaraatiijiyadda guga: ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah | vfxAlert official blog
Istaraatiijiyadda «Guga»: ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee dib u celinta
Ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah ee leh taariikhda dhicitaanka go'an wuxuu u baahan yahay go'aaminta saxda ah ee waqtiga furitaanka. In kasta oo haddii aad marka hore eegto sida ay calaamadaha u u shaqeeyaan ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah wax waliba u fudud yihiin, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad gujiso badhanka "CALL / PUT". Qalabka falanqaynta farsamada ee istiraatiijiyadda "Guga" ayaa kaa caawin doona inaadan khaladaad sameyn.
Waxaan raacnaa mabda'a aasaasiga ah ee ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah "xaqiijinta calaamadaha waa in lagu fuliyaa tilmaamayaal leh algorithms xisaabeed kala duwan." Istaraatiijiyaddu waxay isticmaashaa laba tilmaamood oo farsamo:
Kooxda Bollinger (BB). Tilmaamuhu wuxuu ka warbixinayaa jihada iyo isbeddelka isbeddelka hadda socda, iyo dhaqdhaqaaqa jiifka ah ee khadadka ayaa muujin doona fidsan - xaaladdan, waxaa fiican in laga fogaado suuqa, gaar ahaan haddii qiimaha uu ku socdo marin cidhiidhi ah. Markay xaddiga si ballaadhan u ballaadho (fiiri shaashadda), waxaad isticmaali kartaa astaamo laba- iyo- toban daqiiqo oo dheeri ah oo kordhin kara mugga macaamilka ilaa 10-15%.
Faa'iidada ugu weyn ee Bollinger Bands oo ah tilmaame kanaal ayaa ah calaamadaha hormoodka ah ee isbeddelka xaaladda suuqa (uruurinta, qaybinta, joojinta) iyo xaqiijinta runta ama been abuurka burburka maxalliga ah ee heerarka taageerada / iska caabinta muhiimka ah.
Heerka Xilliga 'Stochastic Momentum Index' (SMI) waa fasiraad xiiso leh oo loo yaqaan 'Stochastic Oscillator'. Nooca caadiga ah, wuxuu xisaabiyaa sida ugu dhow qiimaha hadda jira. Dhanka kale, SMI waxay muujineysaa sida ay ugu dhowdahay barta dhexe ee heerka kala duwan ee Sare / Hoose oo sidaa si ka sii fiican loo hagaajiyay. Tilmaamuhu waa laga ganacsadaa, sida caadiga ah ee 'Stochastic': ka bixida xad dhaafka / badbinta, kala-duwanaanta. Laguma darin dhammaan boosteejooyinka ganacsiga!
Waxaad si fudud uga soo dejisan kartaa habka "Guga" iyo SMI internetka. Waqtiga lagu taliyay wuxuu ka imanayaa M1-15 iyo ka sareeya, waqtiga dhicitaankiisuna waa ugu yaraan 3-5 baararka. Haddii ay suurtagal tahay, xir heshiiska marka calaamadda ka soo horjeedda ay soo muuqato!
Ikhtiyaar (CALL) ikhtiyaar
Qiimuhu wuxuu ka sii gudbaa khadka dhexe ama soohdinta sare ee Bollinger ka dib wuxuu u rogayaa gadaal dambe. Raadinta barta laga soo galo aagga ka sarreeya khadka dhexe;
Sadarka cad ee SMI wuxuu ka jajabayaa gunta hoosta hoose SMI-na wuxuu ka tagayaa aaga la iibinayo (kor ku xusan -40);
Fall (PUT) doorasho .
Ka bixitaanka qiimaha ee ka hooseeya khadka dhexe ama soohdinta Bollinger ee hoose, oo ay ku xigto soo noqosho. Barta laga soo galayaa waa inay ka hooseysaa khadka dhexe;
Khadka cad ee SMI wuxuu jajabayaa casaan iyo SMI wuxuu ka tagayaa aagga xad dhaafka ah (ka hooseeya heerka -40);
Ma jirto jawaab cad; waxaas oo dhami waxay kuxiranyihiin astaamaha hantida, waqtiga iyo xaalada hada jirta. Laakiin haddii aad tahay qof bilow ah, waxaad u baahan tahay inaad sugto dhammaan shuruudaha istiraatiijiyadda in la buuxiyo. Kahor intaadan isticmaalin calaamadda "aan dhammaystirnayn", waxaan kugula talineynaa inaad sugto xaqiijinta vfxAlert ka dibna aan eegno xaaladda Bollinger, SMI ugu dambeysay. Haddii qiimuhu ku soo laabtay kanaalka oo uu u dhow yahay khadka dhexe, hubi in dhaqdhaqaaqu sii socdo, gal ugu yaraan shumaca xiga / hoose ee celceliska BB.
Aan soo koobno . Istaraatiijiyadda "Guga" waxay isticmaashaa nidaamka "tilmaamha isbeddelka + oscillator" ee caadiga ah wax faa iido ahna kuma lahan qaababka la midka ah. Haa, waxaa jira SMI oo ah shaandheeye dheeri ah, laakiin waxay marka hore cabirtaa xawaaraha (qiyaasta) isbeddelka hadda socda oo kaliya markaa waxay muujineysaa jihada. Tan macnaheedu waa markasta oo ay sii badato tirada muddooyinka, ayaa sifiican u shaqeynaya Indha-indheynta 'Stochastic Momentum Index'.
Laakiin isla markaa, dib-u-dhacu wuu sii kordhayaa calaamadaha badan ee xulashooyinka muddada-gaabanna waa la waayi doonaa. Qorayaasha farsamada ayaa maray wadadii yareynta muddooyinka, ama halkii ay ka tagi lahaayeen aasaaska aasaasiga ah oo aan la beddelin, iyagoo isku dayaya inay "soo jiidaan" xogta hoosta Bollinger Bands si loo wada shaandheeyo calaamadaha. Natiija ahaan, labada qalabba waxay u dhaqaaqayaan si isku mid ah, gaar ahaan xilliyada laga soo galo / laga baxo aaggooda aadka u daran. Sidaa darteed, bayaanka ku saabsan shaandhaynta calaamadaha wadajirka ahi sax ma aha; Xaqiiqdii, waxaan leenahay kaliya dib udhac yar oo qaraabo ah midba midka kale sababtoo ah isticmaalka kala duwan ee isku-dhafka xisaabinta!
Beddelka SMI wuxuu noqon karaa qaab tilmaamayaasha mugga (xitaa tilmaamayaasha sax). Dhaqdhaqaaqa isbeddelka xiisaha furan wuxuu ku siin karaa calaamadaha horseedka ah ee isbeddelka dheelitirka awoodda udhaxeysa iibsadayaasha iyo iibiyaasha, waxay xaqiijineysaa calaamadaha binary ee mala awaalka ah , sixitaanka muddada-gaaban marka caqli-galnimada oscillators-ka la jebiyo, oo Bollinger wuxuu bilaabaa inuu "gurguurta" "soohdimaha kore iyo hoose ee bixinaya calaamadaha beenta oo keliya.